संसारको दुर्लभ घटना : कृत्रिम मुटु झोलामा बोकेर हिड्ने यी साहसी महिला – Online Nepalaja
February 13, 2021 63
संसारमा कहिले काँही प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने घटना हुन्छन् । तस्बिरमा देखिएकी खुशी हसिली महिला ‘सलवा हुसेन’ एक त्यस्तै महिला हुन । उनले प्रकृतिलाई नै चुनौती दिएकी छन् ।उनी मुटु नभएकी संसारकी एक मात्र महिला हुन् । यो संसारको एक दुर्लभ घटना हो ।
Prevआ`त्म`हत्या गर्दैछु ,म एउटि सपना म`रेर केही हुदैन हजार सपना बा`च्नुपर्छ (भिडियो हेर्नुस्)
Nextबोक्रामा कालो दाग भएको केरा खानुभएको छ ? जापानमा गरिएको एक अध्ययनले यसो भन्छ !
काठमाडौंमा खुल्यो होटेल- जहाँ ६५ रुपैंयामा पेटभरी खान पाईन्छ । मिठो भात खानलाई मान्छेको भिड (भिडियो हेर्नुस)
यो क्षेत्रका काठमाडौँबासीले कुखुराको मासु खाने गर्नु भएको छ भने आजै बाट छोड्नुहोस्,जाला ज्यान